Gamni Orma irraa Barata cof irraa iyyuu hin Baratu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGamni Orma irraa Barata cof irraa iyyuu hin Baratu!
Gamni Orma irraa Barata Gowwaan of irraa iyyuu hin Baratu!
Damee Boruu tin: Guraandhal 12, 2019
Barri 1992 baayyee fagoo miti. Qaroo Qarree fi Qeerroo Sanaa as dhalatanii aarsaa guddaa qabsoo saba isaanii baasan irraa kan hafee baayyeen keenya waan ijaan agarree raga baana. Hundeen WBO har’a socho’aa jiruu kan balaa bara sana irraa hafe. Kumaatama hedduun dhumee kan lubbuun hafe dararma suukanneessa keessa darbee jira.
Bara sanas kaampii itti galuun kan dhufe maqaa araaran ture. Minilkii kaase amma har’a gootonni fi qaroon Oromoo kan dhuman maqaa araaran akka tahe bareechine beekna. Tokko tokkoon tareessuuf yaroo fi bakka hin qabu. Aadaa Uummatni Oromoo keessatti araara bakka olaanaa qaba. Rakkoo hawwaasa keessa jiru ittiin furata. Ittiin bulas. Habashoonni aadaa kana akka dadhabinsa guddaatti fudhatu. Oromoon Oromoo cabsuuf akka meeshaa waraana guddatti itti dhima bahaa as gahanii. Milkii guddaa fi injifannoo boonsaa ittiin gonfatanii jiru.
Kan araaraaf manguddummaa deemu Oromoo dha. Kan araaramu Oromoo. Kan araarfatu Habashaa. Warri Oromoon lamaan wal amananii waadaa araara yaroo walii galan Habashaan achi irraa siiqe amma isaan gargar mala dhawwata eega. Gargar baasee lamaanuu lafa irraa haxxaa’ee balleessa. WBO haala kana yaroo darbe of irratti agarree jirra. Of irraa barana immoo ammos kiyyoo diinni nuuf qopheessaa jiru kana keessa seenee dhumuuf deemna?
Mee qotiyyoo haa ilaallu. Gafarsa irraa waan adda isa godhuu sammuu xiqqoo qabaachuu duwwaa dha. Utuu akka isa qaluuf deeman beekee nama kana hundaa daamacee irra deemee dagala galee jiraachuu danda’a. Garuu rakkinni akka jiru kan hubatu yaroo isa kufiisuuf finyoo itti xaxani. Yaroo sana dhidhiitatu illee isaa dhumee jira. Utuu hin turiin haaduun kolba isaati dhaabatee dhiigni isaa lola’a.
Ilmaan Oromoo bara baraan qalmaaf oofamuun nu haa gahu. Habashaa wajjin kan nagana jiraachuu dandeenyu yoo wal irra siiqne qofaa taha. Maqaa araara sobaa kanan WBOn harka laatee yoo dhume seenaan Uummata Oromoo cilaatiin barreessamee hafa. Maal jedhee akka ijoollee isaa qaroo tan kanaa akka boo’u Uummatni Oromoo illee hin beeku.
WBOn shiftaa yookan nama karaa bade mit. WBOn qananii ilmaan Oromoo kaayyoo qabatee dagala gale. Kan ayyaan ilaalatoonni fi bitamtonni akka qotiyyoo sana qalmaaf dhiyeessan miti. Haala jiru naanneesse ilaaluu fi hubachuu qaba. Abbootii Gadaa maqaa araaran burjaaja’anii jiranii haal qabusaan of irraa gaggeessuu qaba. Maqaan araara kan ka’uu qabu duraan dursee yoo waraanni RIB Oromoyaa keessa bahe qofa taha.
Haala biyyi Impaayeera Itoopiyyaa jeeqama guddaa keessa galtee ibidi bakka hundaa boba’aa jiru
Haala Oromiyaan humna liyuu Haaiylii, Somalee, Gumuz, Afar, Amhaara marsamtee jirtu
Haala Impaayerri Itoopiyyaa meeshaa waraanan dhiqamaa jiru
Yaroo RIB EPRDF haala sukanneesaa taheen uummata keenya tumaa, hidhaa, ajjeessaa qabeenya isaa saamaa, isa hafe gubaa fi shamaran keenya gudeeda jiru
Utuu uummatni Keenya miliyoon qe’ee isaa irra buqa’e deebi’ee hin qubatiin ykn akkaata itti jiraatu hin argamiin
Haala kana fakkatu keessatti ilmaan Oromoo hidhannaa hiikachiisuun cubamaa dha. Sagalee guddaan abaaramuus qaba. Haalli kun heegree Uummata Oromoof baayyee nu yaadeessuu qaba. Fedhii mootummaa Habashaaf jilbeefatee hojjetuu kana guutuuf hammeenyi ifaanis tahe dhoksaan uummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru amaaf ammatti dhaabbachuu qaba.
Warri mootummaa kana wajjin ni ceenaa jedhee uummata Oromoo burjaajjeessaa jirtan isin gaha. Garaa Mootummaan Kononel Abiyi deemaa jiru argaa jiru yoo hin agartan tahe garaa keessaniif jecha wajjin boola seena. Nu ceesisuuf utuu hin hallayyaa qileeti Uummata Oromoo darbee deemuuf akka karoora qabu ifa jira.
Lafee Gootota Oromoo General Tadasaa Biruu, Mamoo Mazamir, Elemoo Qiltuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Jenaral Waaqoo Guutuu irratti Siidaa Haayile Silaasee nuu dhaaba. Mootummaa tortoraa abbaa lafaa sana of irraa gatuuf aarsaa meeqa baafnee jirra. Bara Haayile Silaasee abban lafaa Amaaraa abbaa manaa Oromoo ergaa bakka fagoo ergee haadha mana isaa wajjin sirree isa irra bula. Nafxayoonni lafa keeya duwwaaf qofa miti kan boo’aa jiran. Haadha mana keenyas ni fudhatu. Maqaa seera eeguun OPDO kana nuuf qopheessa jirti. Ilmaan Oromoo Finfinnee keessatti waraqaa eenyumaa attamitti argatuu iyyaa jiru. Maal jechuu dha? Biyya keenyaa keessa jiraachuuf mirga hin qabnu jechuu dha. Kana Ce’umsi OPDO.
Kononel Abiyi marxifatee nafxanyootaaf hojjechuu malee waan seeran hojjetu tokko hin qabu. Seeraa kabachiisu yoo tahe namoota yakka hojjetan jedhaman Tigrayi keessaa qabee maaliif seeratti hin dhiyyeessu? Seerri mootumaa Itoopiyyaa Oromoo qofa irratti hojjechuu qaba? Qabsoo Uummata Oromoo keessa tokko akka Afaan Oromoo afaan federaala tahu ture. Haa tahu malee Afaan Oromoo, Keniyaa, Somalee fi Jibuuti keessatti kan dhubatamu utuu jiru Afaan Amaaraa Afaan Afrikaa akka tahu gochuun nama kana maal agrsiisa? Waan nama dinqu hin qabu.Kan inni deemuuf sirna federaala kana balleesse akka Minilki humnaan biyya Afaan Amharaa, aadaa Amharaa fi alaaba Amhaaran bultu tokko ijaaruuf akeekate jiraachuu isaa ti.
Kanaafuu yaa WBO qawwee keenya hiikane jilbeefanne hidunu. Ammaa lubbuun keenya nu keessa jirutti gootumani biyyaa fi uummata keenya qabsoofne seenaa cululuqaa dhaloota boruuf dabarsinee wareegamuu filana. Gowwumaan nu gahu. Kiyyoo nuuf qophaa’aa jiru keessa hin seennu. Qaree fi Qeerroon ka’aa xumura garbummaa bakkaan gahuuf!
Injifannoo Uummata Oromoo!
Gadaan Gadaa Bilisumaa Ti!
Dubbii Osoo Hin Qulqulleeffatin Miidiyaatti Bahanii Ummata Burjaajessuun Qaama Biyya Bulchu Irraa Hin Eegamu (Ibsa…
Lolli jiraachuu mala jechuun Filannoo Oromoon qooda irraa hin fudhanne kaardii dirqamaan hiran dirqamaan funaanuun…
RUMICHA RAQA MI’EEFFATE RAQA IRRAA ITTIISUUN HIN DANDA’MU.
Qixxeessaa Lammii, Gurraandhala 23, 2018. Miseensoti paarlamaa ummataa mootummaa ilmaan Tigreen durfamu faaydaa ummataaf ni…
Shira Jaaraa Digdamii Tokkoffaa (21st century conspiracy against the Oromo People)